Hay’adda NISA oo sheegtay inay hakisay heshiis malaayiin doolar oo lagu eedeeyey wasiir hore – Radio Daljir
Noofember 4, 2018 4:50 b 0
Hay’adda NISA oo qaabilsan sirdoonka iyo nabad sugidda dowladda faderaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay hakad gelisay mashruuc malaayiin doolar ah oo uu saxiixay wasiirkii hore ee amniga Cabdirisaaq Maxamed Cumar, si loo baaro, waxaana ay sheegtay inay u gudbisay hanti dhowrka.
Qoraalkan ayaa lagu shaaciyay barta Twitterka waxaa lagu yiri.
“Maanta, oo ah 3-da Nofembar 2018, NISA waxay hakisay una gudbisay Hanti-dhowrka guud ee Qaranka, qandaraasyo malaayiin doolar dhan, oo baxay sanadihii lasoo dhaafay, uuna saxiixay Wasiirkii hore ee amniga, si’ uu u baaro uguna gudbiyo hey’adaha ay khuseyso”ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA.
Dhanka kalle xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Cumar ayaa iska fogeeyey eedaynta, isagoona ku sheegay dacaayad raqiis ah, waxaana uu ku tilmaamay NISA inay isku badashay NSSTii keli taliska sida uu hadalka u dhigaye.
“NISA oo Masuul xil horay u hayay si daahfurana xilkaas ugu wareejiyay Masuulkii xilka kala wareegay in aay dacaayad raqiis ah baraha bulshada soo dhigaan 2 sano ka dib iyado loga gol leeyahay in la isku cabsi geliyo. Waxaa nasiib darro ah in NISA iskubedeshay NSStii kaligitaliska”ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Galmudug garabka Cadaado oo Gole cusub oo wasiiro magacaabay (Akhriso)